Love Hotel ကိုဒီလိုအသုံးပြုကြတယ်? စိတ်ကူးတာထက်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ဖောက်သည်တွေကြောင့် စွံ့ အရတဲ့ပိုင်ရှင်… - JAPO Japanese News
လာ 16 Aug 2021, 9:51 မနက်
အချစ်ဟိုတယ်ဟာ ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေ အချစ်အကြောင်းတွေ့ဆုံပြောကြတဲ့နေရာအဖြစ် ဂျပန်မှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ် ..
ဟိုးယခင်ကတော့ နေရာတော်တော်များများက သိပ်ပြီးမသန့်ရှင်းခဲ့ပေမဲ့၊ အခုတော့ သန့်ရှင်းတဲ့အခန်းမှာ ကာရာအိုခေတို့ ရေချိုးကန်ကြီးတို့ ထားပေးထားတဲ့နေရာတွေများလာတာကြောင့်၊ မိန်းကလေးများသီးသန့်ပါတီပွဲပြုလုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာတောင် လာရောက်အသုံးပြုကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအချစ်ဟိုတယ်ဟာ အဲ့ဒီသဘောတရားအပြင်၊ အလွန်လျှို့ဝှက်တဲ့ ထူးခြားချက်ရှိပါတယ်။
ပုံမှန်ဟိုတယ်များနဲ့မတူဘဲ ဒီလျှို့ဝှက်စွာနေထိုင်တတ်တဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တောင် ဆရာခေါ်လိုက်ရတဲ့အသုံးပြုပုံကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခင်ပွန်းသည်နဲ့ စကားများပြီးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးနောက်၊ ၁ လကြာမျှလာရောက်တည်ခိုခဲ့ပါတယ်။
နေ့တိုင်း လက်အောက်ငယ်သားယာကူဇာက အစားအသောက်တွေကိုလာပို့ပေးတဲ့အတွက်၊ အများအမြင်မှာ ဟိုတယ်ရဲ့အခြေအနေကတော့…
နောက်ပြီး အခန်းအသုံးပြုပုံကတော့ အောချလောက်ပါပေတယ်။
တစ်နေ့တော့ အခန်းထဲကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဝင်သွားတဲ့အခါ၊ ပရိဘောဂတွေအပေါ်မှာ ထမင်းတွေဖိတ်စင်နေပြီး၊ အဲ့ဒီအပေါ်မှာခြေအိတ်ကိုတောင်ချွတ်ထားပါသေးတယ်။
ဒါကိုကြည့်ပြီးစိတ်တိုသွားတဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ၊ “ အမှိုက်ကိုအမှိုက်ပုံးထဲမှာပစ်စမ်းပါ!!” လို့တောင် အော်လိုက်မိပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေစပြီး ၁ နာရီခွဲလောက်စကားပြောရင်း၊ အချင်းချင်းနားလည်မှုရကြသွားကာ “ ဘယ်လိုမှသပ်သပ်ရပ်ရပ်နေနိုင်မယ့်သူမဟုတ်ဘူး” လို့ ပိုင်ရှင်ဘက်ကပဲဖြေသိမ့်လိုက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမဖြစ်တော့ဘဲ၊ ခင်ပွန်းသည်နဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ပြီး ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခန်းက လူအဝင်အထွက်များတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ အရမ်းကိုပျူငှာပြီး၊ အမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်ပေးတယ်။
ခိုးတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ကားကို ဖွက်ထားဖို့အတွက် Love Hotelရဲ့ကားပါကင်က အခြေနေအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ပါပဲ.
Love Hotel ဟာရပ်ထားတဲ့ကားထဲက တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဖော်ထုတ်လို့မရအောင်၊ မမြင်ရအောင်လို့ စဥ်းစားပြီးစီစဥ်ထားတဲ့နေရာတွေများပါတယ်။
ဒီသူခိုးအဖွဲ့ဟာအဖမ်းခံရပြီး၊ တရားရုံးကနေ “ အကူအညီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်” ဆိုတဲ့ကျေးဇူးတင်စာကို Love Hotel ဆီသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
အခြား Love Hotel တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ချစ်သူစုံတွဲတွေစကားများပြီး၊ တီဗွီဖန်သားပြင်ကို remote နဲ့ပစ်ပြီးရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ကာ စိတ်ရှုပ်စရာတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်၊
ဖောက်သည်ရတာကတော့ကောင်းပေမဲ့၊ ပိုက်ဆံဆုံးပြီလို့တောင် ပိုင်ရှင်တွေကပြောလာကြပါတယ်…
အခန်းထဲမှာလည်း စိတ်ကြွဆေးတွေအများအပြားသောက်ပြီး စိတ်ဖော်ပြန်နေတဲ့ ဧည့်သည့်တွေ….
အလွန်လျှို့ဝှက်တဲ့ဟိုတယ်ဆိုတဲ့ ထူးခြားချက်ကနေ၊ မူလရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွေဖယ်သွားတဲ့အသုံးပြုမှုတွေကြောင့်၊ တခြားသူအတွက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့၊ ပိုင်ရှင်ကတော့ မျက်ခုံးလှုပ်နေမှာအသေအချာပါပဲ…
“ချစ်တယ်” လို့ မပြောတတ်ကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေ ~!!!
(၂၅) ရက်နေ့ တိုကျိုကူးစက်မှုအသစ် ၄၀၁ ဦးရှိ၊ အရေးကြီးလူနာ ၅၄ ဦးရှိ